musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » KISS frontman Gene Simmons: Anti-vaxxers muvengi!
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Entertainment • Health News • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Vanhu vanoramba kuvepo kweCCIDID-19 uye vanoda kuparadzira hutachiona vakaipa, "muvengi" anofanirwa kuzivikanwa nekufumurwa.
Vanhu vanofumura vamwe vanhu nekuziva panjodzi yeCOVID-10 'vakaipa'.
Haubvumidzwe kutapurira chero ani zvake nekuda kwekuti iwe uchifunga kuti une kodzero dzekunyengera.
Matauriro aSimmons ari pakati pevachangoburwa kubva kumusasa wevakakurumbira vachidya vaccine refuseniks.
Gene Simmons, mutungamiri weboka redombo kisi, vakapopotera anti-vaxxers avo vanofumura vamwe vanhu munjodzi yeCOVID-19 vachiziva.
Vanhu vanoramba kuvapo kweCCIDID-19 uye vanoda kuparadzira hutachiona vakaipa, Simmons akadaro, achidana anti-vaxxers "muvengi" anofanirwa kuzivikanwa nekufumurwa.
"Hautenderwe kutapurira chero munhu nekuda kwekuti iwe uchifunga kuti une kodzero dzehunyengeri," kisi frontman akadaro.
Nyaya yakauya pa 'TalkShopLive' apo Simmons anga achikurukura nezve 'KISS Kruise' uye kuti vateveri vaida kutora chikamu mune imwe zvino vanofanira kunge vari. vaccin. Akataura kuti hazvina kusiyana nemitemo inoda kusunga bhande rechigaro kana kusaputa muchivakwa.
Zvinhu zvakadai zvinorairwa “kwete nekuti vanoda kukutorera kodzero yako – nekuti isu tose tinozvivenga. Hatidi kunhuwa chiutsi chako,” akadaro Simmons.
"Handidi kubata chirwere chako," muvaraidzi ane makore makumi manomwe nemaviri akadaro. "Handidi kuisa hupenyu hwangu panjodzi nekuda kwekuti iwe unoda kupfuura nemwenje dzvuku."
Akataura kuti vanhu vanoramba vaccines inofanira “kuzivikanwa nokubudiswa pachena.”
“Ziva kuti shamwari dzako ndivanaani nokuva nehanya newe. Izvi zvinosanganisira COVID-19, ”Simmons akadaro. “Kana muchida kufamba pakati pedu musina kubayiwa, muri muvengi.
Matauriro aSimmons ari pakati peazvino anouya kubva kumusasa wevakakurumbira vachidya vaccine refuseniks. Anotaura pachena weBritish TV muratidziri Piers Morgan akavapopotera neChishanu se "boka revanhu vasina spineless p ***ies" vasina kufanirwa nemadzitateguru avo ehugamba.
November 12, 2021 pa 19: 43
Ini handisi anti-vaxxer. Nekudaro ini ndinofunga Mr Simmons pfungwa dzakarasika. Kana iwe uchida kuita munhu muvengi muvengi vanhu vasina pfungwa vari kubayiwa majekiseni vasina kuita tsvakiridzo yavo uye vari kuzviita nekuti vaudzwa kuti vanofanira. Covid inodziviririka zvakanyanya nekungochengeta yakakwana vhitamini D level. Humbowo huripo kune wese anoda kuzvitsvaga. Zvinotaridza zvakare kuti kufa kwese kwakakwira kune avo vanobaiwa pane vasina kubayiwa. Uye pakupedzisira jekiseni harikupi kudzivirirwa. Saka iwe unogona kutapukirwa nekuparadzira vamwe vanhu uye izvi ndizvo chaizvo zviri kuitika.